မြောက်အမေရိကတိုက်ရှိ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေများ စာရင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤသည်မှာ အက္ခရာဝလီအတိုင်း စီထားသည့် မြောက်အမေရိကတိုက်ရှိ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေများ စာရင်းဖြစ်သည်။ မြောက်အမေရိကတိုက်သည် အမေရိကတိုက်၏ မြောက်ဘက်ပိုင်းရှိ တိုက်ဖြစ်ပြီး မြောက်ကမ္ဘာလုံးခြမ်းနှင့် အများစုမှာ အနောက်ကမ္ဘာလုံးခြမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ မြောက်အမေရိကတိုက်ကို မြောက်ဘက်တွင် အာတိတ်သမုဒ္ဒရာ၊ အရှေ့ဘက်တွင် မြောက်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်နှင့် အနောက်ဘက်တွင် မြောက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတို့ဖြင့်ပိုင်းခြားထားပြီး တောင်အမေရိကတိုက်သည် ၎င်း၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။
၂ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်မဟုတ်သော နယ်မြေဒေသများ
၂.၂ အခြားသော နယ်မြေဒေသများ
ကနေဒါနိုင်ငံ[n ၁] ကနေဒါနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Canada
ပြင်သစ်: Canada အော့တဝါမြို့ ကနေဒါဒေါ်လာ
ကျူးဘားနိုင်ငံ ကျူးဘားသမ္မတနိုင်ငံ စပိန်: Cuba ဟာဗားနားမြို့ ကျူးဘားပီဆို၊ Cuban convertible peso
ကော့စတာရီကာနိုင်ငံ[n ၂] ကော့စတာရီကာ သမ္မတနိုင်ငံ စပိန်: Costa Rica ဆန်ဂျို့စ်မြို့ ကော့စတာရီကာကိုလွန်
ဂျမေကာနိုင်ငံ[n ၃] ဂျမေကာနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Jamaica ကင်းစတန်မြို့ ဂျာမေကာဒေါ်လာ
ဂရီနေဒါနိုင်ငံ[n ၃] ဂရီနေဒါနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Grenada စိန့်ဂျော့ရှ်မြို့ အရှေ့ကာရစ်ဘီယံဒေါ်လာ
ဂွါတီမာလာနိုင်ငံ[n ၂] ဂွါတီမာလာ သမ္မတနိုင်ငံ စပိန်: Guatemala ဂွါတီမာလာမြို့ ဂွါတီမာလာကွက်ဇယ်
စိန့်ကစ်နှင့် နီးဗစ်နိုင်ငံ[n ၃] စိန့်ကစ်နှင့် နီးဗစ် ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံ
စိန့်ခရစ္စတိုဖာနှင့် နီးဗစ် ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Saint Kitts and Nevis ဘတ်စတာမြို့ အရှေ့ကာရစ်ဘီယံဒေါ်လာ
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရိနေဒိုင်နိုင်ငံ[n ၃] စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရိနေဒိုင်နိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Saint Vincent and the Grenadines ကင်းစ်တောင်းမြို့ အရှေ့ကာရစ်ဘီယံဒေါ်လာ
စိန့်လူစီယာနိုင်ငံ[n ၃] စိန့်လူစီယာနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Saint Lucia ကက်စထရီမြို့ အရှေ့ကာရစ်ဘီယံဒေါ်လာ
ထရီနီဒတ်နှင့် တိုဘက်ဂိုနိုင်ငံ[n ၃] ထရီနီဒတ်နှင့်တိုဘက်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Trinidad and Tobago ပို့တ်အော့ဖ်စပိန်မြို့ ထရီနီဒတ်နှင့်တိုဘက်ဂိုဒေါ်လာ
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ[n ၂] ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Dominican Republic
စပိန်: República Dominicana ဆန်တိုဒိုမင်ဂိုမြို့ ဒိုမီနီကန်ပီဆို
ဒိုမီနီကာနိုင်ငံ[n ၃] ဒိုမီနီကာဓနသဟာယနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Dominica ရိုဆိုမြို့ အရှေ့ကာရစ်ဘီယံဒေါ်လာ
နီကာရာဂွါနိုင်ငံ[n ၂] နီကာရာဂွာ သမ္မတနိုင်ငံ စပိန်: Nicaragua မနာဂွါမြို့ နီကာရာဂွါကော်ဒိုဘာ
ပနားမားနိုင်ငံ[n ၂] ပနားမားသမ္မတနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Panama
စပိန်: Panamá ပနားမားမြို့ ပနားမားဘာဘိုအာ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ဘလိဇ်နိုင်ငံ[n ၃][n ၂] ဘလိဇ်နိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Belize ဘယ်မိုပန်မြို့ ဘလိဇ်ဒေါ်လာ
ဘဟားမားနိုင်ငံ[n ၃] ဘဟားမားဓနသဟာယနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Bahamas နာဆောမြို့ ဘဟားမားဒေါ်လာ
ဘာဘေးဒိုးစ်နိုင်ငံ[n ၃] ဘာဘေးဒိုးစ်နိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Barbados ဘရစ်ချ်တောင်းမြို့ ဘာဘေးဒိုးဒေါ်လာ
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ[n ၁] မက္ကဆီကိုပြည်ထောင်စု စပိန်: México မက္ကဆီကိုမြို့ မက္ကဆီကိုပီဆို
ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိုင်ငံ[n ၂] ဟွန်ဒူးရပ်စ်သမ္မတနိုင်ငံ စပိန်: Honduras တေဂူဆီဂါလ်ပါမြို့ ဟွန်ဒူးရပ်လန်ပီယာ
ဟေတီနိုင်ငံ[n ၃] ဟေတီသမ္မတနိုင်ငံ ပြင်သစ်: Haïti ပို့တ်အောပရင့်စ်မြို့ Haitian gourde
အင်တီဂွါနှင့် ဘာဘူဒါနိုင်ငံ[n ၃] အင်တီဂွါနှင့် ဘာဘူဒါနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Antigua and Barbuda စိန့်ဂျွန်မြို့ အရှေ့ကာရစ်ဘီယံဒေါ်လာ
အမေရိကန်နိုင်ငံ[n ၁] အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အင်္ဂလိပ်: United States ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ
အယ်ဆာဗေဒိုနိုင်ငံ[n ၂] အယ်ဆာဗေဒိုသမ္မတနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: El Salvador
စပိန်: El Salvador ဆန်ဆာဗေဒိုမြို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ
This section contains areas that are not sovereign states, but are not part of the sovereign states listed above. This includes dependent territories and integral areas ofaprimarily non-North American state.
Dependencies that are not internationally recognized, or not in effect, are listed in italics.
Anguilla Anguilla အင်္ဂလိပ်: Anguilla The Valley အရှေ့ကာရစ်ဘီယံဒေါ်လာ British Overseas Territory
Bajo Nuevo Bank[n ၄] Bajo Nuevo Bank စပိန်: Bajo Nuevo N/A N/A Unincorporated unorganized territory of the United States, uninhabited, disputed by3other nations.
Bermuda Bermuda Islands အင်္ဂလိပ်: Bermuda
ပေါ်တူဂီ: Bermudas Hamilton Bermudian dollar British Overseas Territory
British Virgin Islands Virgin Islands အင်္ဂလိပ်: Virgin Islands Road Town အမေရိကန်ဒေါ်လာ British Overseas Territory
Cayman Islands Cayman Islands အင်္ဂလိပ်: Cayman Islands George Town Cayman Islands dollar British Overseas Territory
Montserrat[n ၃] Montserrat အင်္ဂလိပ်: Montserrat Plymouth (official)
Brades (seat of government) အရှေ့ကာရစ်ဘီယံဒေါ်လာ British Overseas Territory
Navassa Island[n ၅] Navassa Island အင်္ဂလိပ်: Navassa Island Lulu Town အမေရိကန်ဒေါ်လာ Unincorporated unorganized territory of the United States, uninhabited, disputed by Haiti
Puerto Rico Commonwealth of Puerto Rico စပိန်: Puerto Rico
အင်္ဂလိပ်: Puerto Rico San Juan အမေရိကန်ဒေါ်လာ Unincorporated territory and Commonwealth of the United States
Serranilla Bank[n ၄] Serranilla Bank စပိန်: Bajo Serranilla N/A N/A Unincorporated unorganized territory of the United States, uninhabited, disputed by3other nations
Turks and Caicos Islands Turks and Caicos Islands အင်္ဂလိပ်: Turks and Caicos Islands Cockburn Town အမေရိကန်ဒေါ်လာ British Overseas Territory
United States Virgin Islands United States Virgin Islands အင်္ဂလိပ်: United States Virgin Islands Charlotte Amalie အမေရိကန်ဒေါ်လာ Unincorporated organized territory of the United States
Aruba Aruba ဒတ်ချ်: Aruba Oranjestad Aruban florin Constituent country of the Kingdom of the Netherlands
Bonaire[n ၆] Bonaire ဒတ်ချ်: Bonaire
တမ်းပလိတ်:Lang-pap Kralendijk United States dollar Special municipality of the Netherlands
Clipperton Island Clipperton Island ပြင်သစ်: Île de la Passion N/A Euro Overseas minor territory of France
Curaçao Curaçao ဒတ်ချ်: Land Curaçao
Papiamento: Pais Kòrsou Willemstad Netherlands Antillean guilder Constituent country of the Kingdom of the Netherlands
Federal Dependencies of Venezuela Federal Dependencies of Venezuela Gran Roque Bolivar fuerte
Nueva Esparta Nueva Esparta စပိန်: Estado Nueva Esparta La Asunción Bolivar fuerte
Petro State of Venezuela
Greenland Greenland တမ်းပလိတ်:Lang-kl
ဒိန်းမတ်: Grønland Nuuk Danish krone Constituent country of the Kingdom of Denmark
Guadeloupe[n ၇] Guadeloupe ပြင်သစ်: Guadeloupe Basse-Terre Euro Department and region of France
Martinique[n ၇] Martinique ပြင်သစ်: Martinique Fort-de-France Euro Department and region of France
Saba[n ၆] Saba ဒတ်ချ်: Saba
အင်္ဂလိပ်: Saba The Bottom United States dollar Special municipality of the Netherlands
Saint Barthélemy Collectivity of Saint Barthélemy ပြင်သစ်: Saint-Barthélemy Gustavia Euro French overseas collectivity
Saint-Martin Collectivity of Saint Martin ပြင်သစ်: Saint-Martin Marigot Euro French overseas collectivity
Saint Pierre and Miquelon Territorial Collectivity of Saint Pierre and Miquelon ပြင်သစ်: Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre Euro French overseas collectivity
San Andrés and Providencia[n ၈] Archipelago of San Andrés, Providencia and Santa Catalina စပိန်: San Andrés y Providencia San Andrés Colombian peso Department of Colombia
Sint Eustatius[n ၆] Sint Eustatius ဒတ်ချ်: Sint Eustatius
အင်္ဂလိပ်: Statia Oranjestad United States dollar Special municipality of the Netherlands
Sint Maarten Sint Maarten ဒတ်ချ်: Eilandgebied Sint Maarten Philipsburg Netherlands Antillean guilder Constituent country of the Kingdom of the Netherlands
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ Member of the North American Free Trade Agreement.
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ ၂.၆ ၂.၇ Member of the Central American Integration System.
↑ ၃.၀၀ ၃.၀၁ ၃.၀၂ ၃.၀၃ ၃.၀၄ ၃.၀၅ ၃.၀၆ ၃.၀၇ ၃.၀၈ ၃.၀၉ ၃.၁၀ ၃.၁၁ ၃.၁၂ Member of the Caribbean Community. The Caribbean Community also includes Guyana and Suriname.
↑ ၄.၀ ၄.၁ Certain U.S. government documents list these as unorganized, unincorporated territories of the United States. For the most part, however, they are under Colombia administration as an integral part of Colombia, part of the San Andrés department. They are also claimed by Nicaragua, and in part by Jamaica and Honduras.
↑ Claimed by Haiti.
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ Part of the Netherlands.
↑ ၇.၀ ၇.၁ Part of France.
↑ Part of Colombia.
↑ North America။ Encyclopædia Britannica။
တိုက်ကြီးများအလိုက် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေများ စာရင်း
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြောက်အမေရိကတိုက်ရှိ_အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့်_အမှီအခိုနယ်မြေများ_စာရင်း&oldid=708063" မှ ရယူရန်
တိုက်ကြီးများအလိုက် နိုင်ငံများ၏ စာရင်းများ
အမေရိကတိုက်ရှိ နိုင်ငံများ၏ စာရင်းများ
ဒတ်ချ်ဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဒိန်းမတ်ဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၁:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။